Usomabhizinisi waseNigeria ukusetha amabhizinisi ayi-10 e-Afrika - Afrikhepri Fondation
USOMABHIZINISI waseNIGERIAN WOKWAKHA AMABHIZINISI AYI-10 E-AFRIKA
UTony Elumelu, ongusomabhizinisi waseNigeria futhi ongusihlalo weHeirs Holdings, ukhuluma ne-AFP engxoxweni ebingo-Okthoba 11, 2013 eWashington, DC. U-Elumelu uthembise ukutshala imali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 2.5 ohlelweni lwe “Power Africa” lukaMengameli waseMelika uBarack Obama okuhlose ukukhulisa amandla e-Afrika eseningizimu yeSahara, lapho abantu ababili kwezintathu bengenawo amandla avamile. Kepha umzamo ohambisanayo kwi-US Congress ushaye ingxabano empikiswaneni yezidingo zokuthi amaphrojekthi athile asekelwa yi-US aphansi ekukhishweni kwekhabhoni okusolwa ngokuguquka kwesimo sezulu. I-AFP PHOTO SHAUN TANDON (Isikweletu sezithombe kufanele sifunde i-SHAUN TANDON / AFP / Getty Izithombe)
Billionaire zimali kanye UMuphi uTony Elumelu Nigerian 100 ngeke Sichitha izigidi zamadola ukudala izinkampani 10 000 Afrika yonkana eminyakeni ezayo 10.
Lo somabhizinisi waseNigeria umemezele ukuzibophezela kwakhe ngesikhathi kunesithangami nabezindaba ebesingoMsombuluko eLagos lapho kwethulwa khona uhlelo lweTony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme (TEEP).
Lolu hlelo luhlelo lwe-pan El-Afrika lokuhweba lweTony Elumelu Foundation, oluthatha iminyaka eminingana futhi lubandakanya ukuqeqeshwa, ukuxhaswa kanye nokwelulekwa, ukukhulisa isizukulwane esizayo sabosomabhizinisi base-Afrika. Lolu hlelo luzokhomba futhi lusize ukuthuthukisa ama-start-up kanye nama-start-up ase-Afrika kule minyaka eyishumi ezayo ngenhloso yokwakha imisebenzi emisha eyizigidi ezi-10 kanye namaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ kumali etholwa minyaka yonke.
Ukukhethwa kwe-TEEP kuzoqala ngoJanuwari 1 bese kuphela izinyanga ezimbili kamuva. Zizokwenziwa ngokuphelele ku-inthanethi ngewebhusayithi yesisekelo ngezilimi ezintathu: isiNgisi, isiFulentshi nesiPutukezi.
Lolu hlelo luvulelekile kosomabhizinisi abavela emazweni angama-54 ase-Afrika, kodwa hhayi kulabo abanamabhizinisi ase-Afrika azinze phesheya kwezilwandle. "Kumele usebenze, uphefumule, ukhule e-Afrika," kugcizelela uParminder Vir, umqondisi we-TEEP, ekwethulweni ngokusemthethweni. Izinkampani kumele zibe ngaphansi kweminyaka emithathu yonke futhi yonke imikhakha yomsebenzi ikhathazekile ngaphandle kwezikhungo zocwaningo, izinhlangano zezenkolo, abahwebi, osonkontileka abangaphansi kohulumeni.
Ikomidi Ukukhetha yakhiwa Tony Elumelu, Ory Okolloh (Umqondisi Omidyar Network utshalomali e-Afrika), Ayodeji Adewunmi (co-umsunguli umsebenzi indawo Jobberman) Vera Songwe (Umqondisi Senegal, Cape Verde, Gambia, Guinea-Bissau kanye Mauritania Lomhlaba), Opunimi Akinkugbe, umholi we-pan-Afrika Bestman imidlalo imidlalo.
Izinkampani eziyi-1 000 ezikhethiwe zizobe sezihlomula ngokuqeqeshwa okuku-inthanethi nokufundiswa amasonto ayi-12. Ngemuva kwalokho, kuzohlelwa i-bootcamp kanye nesithangami esikhulu (i-Elumelu Entrepreneurship Forum) ngoJulayi nango-Agasti 2015. Abokuqala kuzofanele baqede izinhlelo zabo zebhizinisi ngasekupheleni kuka-2015 futhi labo asebephothule lolu hlelo ngempumelelo bazozuza imizuliswano emibili yezimali: imali yokuqala yokutshalwa kwemali engu- $ 5000 ngaleso sikhathi, kuya ngecala, isibili (isikweletu noma imali) yenani elifanayo uma kwenzeka kuba nenqubekela phambili eyanele ekufezekisweni kwezinhlelo zebhizinisi.
Owabe Umqondisi Hlobanisa we Rockefeller Foundation e-Afrika, Wiebe Boer manje umholi we Tony Elumelu Foundation: "ngaphothula umlando Afrika futhi Ngingakutshela ukuthi labo ukufunda ngale ndaba ukubona kulo mzuzwana njengoba mlando. Lokhu kuyisinyathelo esibaluleke kunazo zonke ngokobulili e-Afrika kanye nokutshalwa kwezimali okukhulu ngumuntu ongu-African philanthropist, "esho.